အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နှင့် စဉ်းစား ကြည့်ကြပါစို့..
14 Responses to “ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နှင့် စဉ်းစား ကြည့်ကြပါစို့..”
နှေးကွေးလှသော connection speed ကို ကြိမ်ဆဲနေရင်း internet တောင်မသုံးဘူးသူတွေ လောကကြီးမှာ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ :-)
I hate like that girls.
I believe it, coz it has happened quite similar event btw us.One of the boy is sacrificingalot but she just take advantage and neglect him.....
အင်း တစ်ခုခုဆို စိတ်တိုင်းမကျတာတွေ များနေတာ ချောရဲ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ဆင်ခြင် လိုက်အုံးမယ် ကျေးဇူး
ပေါ်လီယာနာလို စိတ်မျိုးထားနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်မိတယ်။
အင်းးးး ဖတ်ပြီးတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘ၀အခြေအနေ အနိမ့်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့လူတွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့ဖူးလို့ပဲ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အသိတရားလေးရစေလို့ ကျေးဇူး ချစ်မကြီး
the story doesn't make sense :P
yu wa said...
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အသိတရားလေးရစေလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ
missgreenlady.mylovecafe.net to GoogleReader!
hnin mar said...
မမပြောသလိုတာ လူတိုင်း အဲလိုစဉ်းစားကြမယ်ဆို၇င်
ဒီကမ္ဘာကြီးက တကယ်ဘဲ ပျောက်သွားလောက်တယ်နော်အမ---